Third Year (Semester V) (B.Agr.Sc.) Entrance Announcement for (T) – Yezin Agricultural University
(၄၃) ကြိမ်မြောက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူများ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားရန်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၄၃)ကြိမ်မြောက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
အဆိုပါ ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ဤတက္ကသိုလ်သို့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် တတိယနှစ် (Semester V) (B.Agr.Sc.) သင်တန်းသို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်ကြေး၊ ကျောင်းလခနှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေးများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့ထိ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။